XOG SIYAASADEED: Isimadda gobalada Sool & Cayn oo arrin xasaasi ah ka codsaday M/weyne Farmaajo, Muxuuse ka yiri? | Puntlandi.ca
Home Puntland XOG SIYAASADEED: Isimadda gobalada Sool & Cayn oo arrin xasaasi ah ka codsaday M/weyne Farmaajo, Muxuuse ka yiri?
XOG SIYAASADEED: Isimadda gobalada Sool & Cayn oo arrin xasaasi ah ka codsaday M/weyne Farmaajo, Muxuuse ka yiri?
Wararka naga soo gaaray magaalada Garoowe ayaa sheegaya in uu kulan gaar ah dhexmaray Madaxweynaha dawladda faderaalka Soomaaliya oo maalmahan kusugnaa deegaanada Puntland iyo Isimada gobalada Sool iyo Cayn ee kusugan magaalada Garoowe, kaas oo ay uga hadleen xaaladihii ugu dambeeyey.
Wararka ayaa sheegaya in ay Isimadan ay ka codsadeen Madaxweynaha Soomaaliya in uu taageero ku siiyo sidii loo difaaci lahaa deegaanadooda, oo ay sheegeen in ay isku hayaan Midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Sidaas oo kale Isimada ayaa codsaday in deegaanadaas si caalami ah loogu raadiyo taageero loogu dhisayo dawlad gobaleed u gaar ah, si looga madax-banaaneeyo labada dhinac ee ku hardamaya, taas oo ay sheegeen in ay muhiim tahay.
Madaxweynaha Faderaalka ayaa la sheegay in uu ka gaabsaday dalabyada qaarkood, balse uu sheegay in uu soo dhaweynayo talaabooyinka khuseeya arrimaha horumarinta iyo sidii loo ilaalin lahaa Midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Sidaas oo kale mar uu ka hadlayey dhismaha dawlad gobaleedka cusub, ayuu sheegay in ay taasi tahay mid utaal Shacabka deegaanadaas, oo ka kalatirsan maamulada Puntland iyo Somaliland, ayna xooga saarayaan sidii looga shaqeyn lahaa in Soomaalidu ay horey u socoto.
Warar hoose ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Famaajo uu taageero dhaqaale siiyey Isimada qaarkood, taas oo ku wajahan marxalada dagaal ee hadda kasoo cusboonatay deegaanadaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay caqabado dhanka socdaalka ah, gaar ahaana waxaa waqti badan ka qaatay sidii uu labada dhinac ee Somaliland iyo Puntland uga dhaadhicin lahaa joojinta dirir colaadeed oo kasoo cusboonaatay xadka ay isku hayaan labada dhinac.